PressReader - Grocott's Mail: 2018-10-05 - Ibin­comeka itu­mente ya­maqela an­gaphantsi kweminyaka el­ishumi eli­ne­sih­lanu
Ibin­comeka itu­mente ya­maqela an­gaphantsi kweminyaka el­ishumi eli­ne­sih­lanu
Grocott's Mail - 2018-10-05 - SPORT - NGUCHRIS TOTOBELA
IMakana LFA iy­iqukum­bele itu­mente yayo ya­maqela an­gaphantsi kweminyaka el­ishumi eli­ne­sih­lanu. Lom­cimbi ububan­jelwe kwibala lase­joza, IJD Dlepu, kulem­pelaveki sisuka kuyo kwaye ubuy­inxalenye yemib­hiy­ozo yosuku lwa­magugu.
Le tu­mente ibix­haswe lisebe lenkcubeko ne­mid­lalo ku­leng­ingqi yesarah Baart­maan. La­maqela aqale imid­lalo yawo yokukhiqana ngomvulo umhla wokub­hiy­ozela am­agugu. Kumd­lalo wokugqi­bela wobuntshat­sheli, isophia Stars ijon­gene nqo ne­golden Brothers kumd­lalo obu­vutha amadan­gatye.
Igolden Brothers iye yacinezela zisuka nje yankqunkqa ibuyelela kwi­ipali ze­sophia ok­wezulu lasemthatha, kodwa isophia akhange itatazele ngasemva nang­ona bikhangeleka yothuk­ile.
Omabini la­maqela awa­fumene am­ath­uba kodwa kwanz­ima ukuwaseben­zisa kwade kwayiwa ekhefini ebam­bene nge­qanda macala.
Nokuba ibiy­in­toni ethethwe ngumqe­qeshi we­sophia ngeth­uba be­sekhefini iseben­zile, nan­jen­goko abad­lali bayo be­buye nga­mandla kwisiqin­gatha sesi­b­ini. Ukun­gak­wazi ukugqibezela phambi kweepali kuwachanile kakhulu omabini la­maqela.
Bekushiyeke imizuzu nje emib­ini phambi kokuba kuphele umd­lalo ngeth­uba un­oz­inti we­sophia en­qanda ib­hola ebinz­ima kwaye iqonde nqo em­na­theni, kodwa wax­huma wabuya nayo.
Isophia Stars iye ya­phumelela nga­man­qaku am­athandathu kwamahlanu kwi­ipenal­iti, emva kokuba up­hele umd­lalo en­tan­ganye nge­qanda macala la­maqela. Umqe­qeshi we­sophia umthuthuzeli Silo uthe “ubun­z­ima lomd­lalo kodwa ndiyavuya kakhulu kuba side sa­phumelela. Si­funa ukushiya umzila wokuba lelona qela liqhuba kakuhle kwib­hola yama khwenkwana aselula”.
Umqe­qeshi we­broth­ers, uthoza­mile Yaka uthe “in­tle into endiy­ibukele apha namh­lanje nang­ona si­bethiwe. Aseben­zile amakhwenkwe am kwaye ndiyaz­ingca ngawo. Usom­pempe naye uwu­lawule kakuhle lomd­lalo. Inye into en­di­danisayo kukungabonakali ema­baleni kwabad­lali ababe­fudula bed­lala nathi ku­dala, nabazali abangaziyo tu uku­zox­hasa abant­wana babo xa bed­lala”.
On­gusih­lalo we komiti yokhuphiswano kwimakana LFA um­numzana Tsotsa uthe “iqhube kakuhle le­tu­mente kwaye khange kubekho mag­ingxig­ingxi kodwa ke ndi­funa nje uku­ty­i­ty­im­bisela um­nwe onke la­maqela at­salel­weyo. Ndibulela abax­hasi bethu, abantu abazi­dini­leyo bazobukela apha kanti nakwi phep­hand­aba lalapha ekhaya igro­cott’s Mail ngokuthi gqolo ipa­pasha imid­lalo yethu”.
Unob­hala we­makana LFA uakhona Heshu up­hen­d­ule wen­jenje kwiz­ity­holo zokud­lala kwabad­lali abadala ku­maqela amakhwenkwana amanc­inci “kun­z­ima ukuwu­lawula lomkhwa wokud­lal­iswa kwabad­lali abadala nan­jen­goko kun­gase­tyen­ziswa zazisi kwaye nabo abaphathi bala­maqela ku­fu­neka banyaniseke baqinisekise ukuba bad­lal­isa abant­wana ngok­u­fanelek­i­leyo”. Photo: Sue Maclen­nan